Apple Inoburitsa Yetatu Beta yewatchOS 3.1 yeVagadziri | Ndinobva mac
Zvinotaridza kuti mumavhiki apfuura Apple mainjiniya havasisiri kushanda pamwe chete. Kwemavhiki akati wandei mabetas akasiyana eIOS, macOS, watchOS uye tvOS hazvichaburitswa pamwechete, chimwe chinhu icho kambani yakanga isati yambojaira. Maawa mashoma apfuura vakomana vanobva kuCupertino vatangisa yechitatu beta yeWatchOS 3.1, beta iyo senguva dzose inongowanikwa kune vanogadzira. Iyi beta nyowani inoramba ichitarisa mukuvandudza mashandiro uye kugadzikana kweApple smartwatch pasina kupa chero yakakosha nhau, sezvo isu takakwanisa kuverenga muzvinyorwa zveiyi beta nyowani.
Iyo yechitatu vhezheni yeWOSOS yakatiunzira nhau dzakakosha, kunyanya maererano nekumhanyisa uye mashandiro ezvishandiso. Iine watchOS 3, kuvhura uye kugadzirisa kunyorera kuri kukurumidza kupfuura neshanduro yapfuura. Uye zvakare, zvatiunzirawo mukana wekugona kuvhura Mac yedu kuburikidza neApple Watch, hongu, iyo Mac inofanirwa kuve ingangoita kubva mugore ra2013. Zvakare, vashandisi vane maMac akura vanosiiwa kunze kwenhau idzo Apple inotitorera mushanduro dzayo nyowani dzeMacOS, iOS uye watchOS.
Chero mugadziri anoda kuisa iyi yazvino beta anofanira kuenda kuComputer Center uye anotora pasi inoenderana neyechitupa chewatchos 3. Kune avo vese vashandisi vakatoisa chero ewavo apfuura maOSOS 3.1 betas, zvese zvavanofanirwa kuita kuenda iyo Apple Tarisa kunyorera pane iyo iPhone uye tinya paSoftware Ongororo.
Apple inongoburitsa iyo watchOS X betas yevagadziri kubvira nhasi zvichiri kusakwanisika kudzikisira uye kudzosera kune yapfuura vhezheni yeWOSOS kana iyo yazvino vhezheni ine kuita kana kushanda kweinetso. Kana isu tichida kudzokera kune yapfuura vhezheni isu tichafanirwa kuenda kuApple Chitoro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple inoburitsa yechitatu beta yeWOSOS 3.1 yevagadziri
Apple Pay yave kuwanikwa muNew Zealand